के फाइदा छ खाना बिस्तारै चपाएर खानुको ? | सुदुरपश्चिम खबर
के फाइदा छ खाना बिस्तारै चपाएर खानुको ?
खाना खाँदा स्वाद लिएर चपाई–चपाई खानुपर्छ । तर, किन ?
त्यस बिपरित राम्ररी नचपाई, हतार–हतार खानेकुरा खाइयो भने त्यसबाट आवश्यक पोषक तत्व शरीरले ग्रहण गर्न सक्दैन ।
यसले मोटोपना बढ्नुका साथै खाएको खानालाई शक्तिमा परिणत गर्ने –मेटाबोलिक )क्षमतामा ¥हास आउने सम्भावना बढी रहन्छ । शरीरको मेटाबोलिक क्षमतामा ¥हास आएमा मधुमेह हुने, मोटापना, मुटु रोग लगायतका समस्या पैदा हुन्छ ।
–पूर्खाहरुले भन्ने गरेका छन्, खानेकुरा स्वाद लिएर खानुपर्छ । कुनैपनि खानेकुरा हतारमा पेट भर्नका लागि खाने होइन, स्वाद लिएर मन तृप्त हुनेगरी खानुपर्छ । यसले शरीरलाई उर्जा दिन्छ, मनलाई सन्तुष्ट तुल्याउँछ ।
–खानेकुरा सेवन गर्दा बिस्तारै चपाएर खानुपर्छ । हामीलाई थाहा नै छ, राम्ररी चपाएको खानेकुराले पाचन यन्त्रलाई भार दिदैन । सहजै पच्छ । यसले शरीरलाई आवश्या पोषक तत्व आपूर्ति हुन पाउँछ ।
–चपाएर खानुको अर्को फाइदा भनेको ओभरडोज खाइँदैन । जबकी हतारमा खाना सेवन गर्दा भरपेट खाइन्छ । के भनिन्छ भने खाना कहिल्यै भरपेट खानुहुँदैन । यसले पचाउने क्रियामा असर गर्छ । खाना सेवन गर्दा एक तिहाई भाग खाली रहनुपर्छ ।
–खाना चपाएर सेवन गर्दा पेटमा अतिरिक्त भार पर्दैन । अपचको समस्या हुँदैन । एसिडिटी बढ्दैन । नयाँ पुस्ता बाट सभार
क्याप्चा हल गर्नुहोस् * + 33 = 39